မေးစရာရှိရင် မေးနိုင်ပါတယ် (Any Questions? by Guy Perring) - Myanmar Network
မေးစရာရှိရင် မေးနိုင်ပါတယ် (Any Questions? by Guy Perring)
Posted by Myanmar Network on May 26, 2011 at 11:25 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Presentation လို့ခေါ်တဲ့ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်တစ်ခု လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် တစ်ကယ်တမ်း ဆွေးနွေးတင်ပြတဲ့ အပိုင်းက အခက်ခဲဆုံး မဟုတ်ပါဘူး။ ဆွေးနွေးတင်ပြပြီးတော့ မေးမြန်းလာတဲ့မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြားတဲ့ အပိုင်းကသာ အခက်ခဲဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးတင်ပြချိန်မှာ မှတ်စုတွေကို ကြည့်ချင်ရင် ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း စိတ်ကြိုက် စီစဉ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပရိတ်သတ်ကို မေးခွန်းတွေ မေးပါလို့ ဖွင့်ပေးလိုက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် ဘာတွေမေးလာမယ်ဆိုတာ မသိနိုင်တော့ပါဘူး။ အဲဒီအပြင် ပရိတ်သတ်ထဲမှာ တင်ပြဆွေးနွေးသူနဲ့ ညီတူညီမျှ တတ်သိနားလည်နေသူတွေလည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။
ပရိတ်သတ်ဆီက မေးမြန်းလာတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြားရာမှာ သိထားရမယ့် အဓိကအချက် တစ်ချို့ရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးကတော့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စတင် ပြောဆိုတာနဲ့ ကိုယ်ဟန်အမူအရာ ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲသွားပြီး စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ အသံဖြစ်လာတဲ့ အတွက် သတိထားရပါမယ်။ ပရိတ်သတ်က မေးလာတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြားရာမှာ ရှောင်ရှားရမယ့် အချက်အချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မေးခွန်းမေးလာပြီဆိုရင် နောက်တစ်လှမ်းပြန်မဆုတ်ပါနဲ့။ (ကာကွယ်ပြောကြားတော့မယ် ဒါမှမဟုတ် စိုးရိမ်ပူပန်နေတယ်လို့ ထင်သွားနိုင်တယ်။)
အသံကျယ်ကျယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် အသံမြှင့်ပြီးပြောဖို့မလိုပါဘူး။
မေးခွန်းမမေးခင်မှာ ခန္ဓာကိုယ်က တောင့်တင်းနေပြီးတော့ မေးခွန်းဖြေနိုင်မှန်းလဲ သိရော စိတ်သက်သာသွားတာကို သိပ်ကြီး မသိသာပါစေနဲ့။
ဆွေးနွေးတင်ပြလိုသူ Presenter တစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်ကယ်တမ်းစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့တာကတော့ သူမဖြေတတ်တဲ့ မေးခွန်းမျိုး မေးလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြေရမလဲ စဉ်းစားနေတဲ့ အချိန်မှာ “That’sagood question.” “ဒီမေးခွန်းက တော်တော်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းပဲ” လို့ ပြန်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုပြောတဲ့ အတွက် အချိန်နဲနဲ ပိုရလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ဖြေရိုးဖြေစဉ် ဖြေတာမျိုးက မေးလာတဲ့မေးခွန်းကို ရှောင်ပြီး မူဝါဒအကြောင်းတွေ ပြောလိုတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ လက်သုံးဆိုပြီး ယူဆကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီလို ပြောမယ့်အစား ရှင်းပြပါဦးလို့ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်တဲ့ စကားမျိုးက ပိုကောင်းတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ အဖြေမျိုးဆိုရင် သင့်တော်နိုင်ပါတယ်။
Sorry, I didn’t quite follow that, could you repeat that again please?
သိပ်နားမလည်လိုက်လို့ နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ပြောလို့ရမလား။ (နားမလည်ခြင်း)
Sorry, I didn’t quite catch that, could you repeat that again please?
ပြည့်ပြည့်စုံစုံမကြားလိုက်လို့ နောက်တစ်ခေါက်လောက်ပြန်ပြောလို့ရမလား (မေးခွန်းမေးသူ အသံ တိုးလွန်းခြင်း၊ သို့မဟုတ် မိုက်ကရိုဖုန်း ပေးသော်လည်း နောက်ကျနေခြင်း)
ယေဘုယျအားဖြင့် အဖြေကို မသိဘူးဆိုရင် မသိကြောင်းကို တိုက်ရိုက်ရိုးရိုးသားသားပဲ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အဖြေကို ပြန်ပြီးတော့ မေးမြန်းကြည့်ပါမယ်။ နောက်ပြန်ပြောပါ့မယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်းဖြေနိုင်ပါတယ်။
I don’t know the precise answer to that, can I get back to you later.
အဲဒီမေးခွန်းကို ကျွန်တော်တိတိကျကျတော့ မဖြေတတ်ပါဘူး။ နောက်တော့ ပြန်ဆက်သွယ်ပြီး ဖြေပေးပါ့မယ်။
ဒီလိုဖြေမယ်ဆိုရင်တော့ ဆက်သွယ်ရမယ့် အသေးစိတ်အချက်တွေ သိထားပြီးချင်းသိထားပြီး မဟုတ်ရင် တာဝန်ယူထားရပါမယ်။ နောက်ပြီး တစ်ကယ်တမ်းလည်း ပြန်ဖြေပေးရပါမယ်။ မေးခွန်းတစ်ခုကို ဖြေလိုက်မယ်ဆိုရင် အတွင်းရေးအချက်အလက်တွေ၊ အမှားအယွင်းအတိမ်းအစောင်းအချက်တွေ ပေါ်ပေါက်သွားနိုင်တာမျိုးဆိုရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြေကြားနိုင်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ဒီအကြောင်းကို မှတ်ချက်ပေးလို့ မရသေးပါဘူး။ ရှင်းလင်းတင်ပြချက်ပေးခြင်းအတွက်မှာ ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေပါသွားပြီးဖြစ်လို့ရှိရင် တိုက်ရိုက်မေးခွန်းမေးသူကို ဒါပြောပြီးသားပဲလို့ ပြောမယ့်အစား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဖြေကြားနိုင်ပါတယ်။
Well as I mentioned earlier, and sorry I didn’t make it clear………….
စောစောတုန်းက ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အဲဒီတုန်းကတော့ ရှင်းအောင်မပြောမိဘူးထင်ပါတယ်။
ဆွေးနွေးတင်ပြသူတွေ မေးခွန်းဖြေကြားရာမှာ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကတော့ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်က အမေးအဖြေအတွက် သတ်မှတ်ချိန် အားလုံးကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ဖို့ ကြိုးစားလာတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် လူကြားထဲ ပြောရဆိုရတာကို သဘောကျပြီးတော့ သူတို့ချည်းပြောနေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မျက်လုံးချင်းဆုံပြီး ကြည့်တာကို နည်းလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ မေးခွန်းကို ဖြေပြီးတာနဲ့ အခန်းရဲ့ အခြားတစ်ဖက်ကို ကြည့်လိုက်ပါ။ မေးခွန်းမေးသူကို ပြန်ပြီးတော့ ကြည့်လျှင် နောက်ထပ် မေးခွန်းဆက်မေးပါလို့ ဖိတ်ခေါ် အားပေးသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ မေးခွန်းအမေးအဖြေအတွက် ၁၀ မိနစ်သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင် ၁၀မိနစ်ထက်ပိုပြီး မဖြေပါနဲ့။ ဒီမေးခွန်းမေးသူက အတင်းပဲ ဆက်မေးဖို့ကြိုးစားနေရင် ဒါမှမဟုတ် မေးခွန်းက အရှည်ကြီး အသေးစိတ် ဖြေရမယ့် မေးခွန်းမျိုး ဆိုရင် နောက်မှ ဆက်ပြီးတော့ ဖြေပေးပါမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းနိုင်ပါတယ်။
That’s quiteacomplex issue, can I speak to you individually after the session. Well, we’ve come to the end of our allotted time, so thank you for your attention.
ဒီကိစ္စကရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးတင်ပြပွဲပြီးတဲ့အခါမှာ နှစ်ယောက်ချင်း ပြောလို့ရမလား။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်ကုန်ဆုံးသွားပါပြီ၊ နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(Guy Perring ၏ Any Questions? အားဆီလျော်သလို ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင် ရေးသားထားသော မူလဆောင်းပါးနှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ် ဆောင်းပါးများအား ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)
အထက်ပါ ဆောင်းပါးအားကူးယူ၍ အခြား website နှင့် blog များတွင် တင်မည်ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/any-questions-by-guy-perring မှကူးယူကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန်။
Permalink Reply by Cho Cho Lwin on June 14, 2011 at 8:42
Good Topic. By reading this , we can know do and don't for presentation.Thank U .
Permalink Reply by May Myat Thu on June 21, 2011 at 7:52
Permalink Reply by pyaephyothat on August 30, 2011 at 18:51
Permalink Reply by Lin Lin on February 24, 2015 at 10:17